လှည်းကူးတွင် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတစ်ဦး လည်ပင်းဓားထောက်ခံရပြီး ဆိုင်ကယ် အလုခံရ ~ Myanmar Online News
လှည်းကူးတွင် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတစ်ဦး လည်ပင်းဓားထောက်ခံရပြီး ဆိုင်ကယ် အလုခံရ
3:26 AM မှုခင်းသတင်း No comments
၈.၇.၂၀၂၀. ည ၁၁ နာရီ ၅၀ မိနစ်ခန့်က လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ဒရယ်ဘိုကျေးရွာ ရွာလည်ကွေ့ အနီးတွင် နေထိုင်ပြီး ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ ဆွဲစားသည့် ကို........ သည် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ လာငှားသည့် သူ ၂ ဦးအား တင်ဆောင်ပြီး ဖောင်ကြီးလမ်းအတိုင်း မောင်းနှင်လာစဥ် မျက်လုံးတဖက်ပိတ်ဘုရားလမ်းနား အရောက်တွင် အငှားစီးသူများမှ ၄င်း၏ လည်ပင်းအားဓားဖြင့် လှီးပြီး ဆိုင်ကယ် လုယက်ခြင်း ခံရကြောင်း သိရသည်။
၄င်းမှလည်း အငှားသမားပိုင် ထီးဖြင့် ပြန်ရိုက်သဖြင့် မြက်တောထဲ ဝင်သွားကြောင်း၊ လည်ပင်းအလှီးခံရသည့် ဒဏ်ရာများမှာ ဓာတ်ပုံပါ အတိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဓားနှင့် လှီးသူများမှာ သူ့ဆိုင်ကယ်ကို ၃ ခါလောက် ငှါးစီးဖူးသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
crd-လှည်းကူး ငါးပိချက် #Myanmar_Online_News
လှည်းကူးတွင် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတစ်ဦး လည်ပင်းဓားထောက်ခံရပြီး ဆိုင်ကယ် အလုခံရ (ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ ဆရာကြီးများ သတိပြုကြပါ)
၈.၇.၂၀၂၀. ည ၁၁ နာရီ ၅၀ မိနစ်ခန့်က လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ဒရယ်ဘိုကျေးရွာ ရွာလည်ကွေ့ အနီးတွင် နေထိုင်ပြီး ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ ဆွဲစားသည့် ကို........ သည် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ လာငှားသည့် သူ ၂ ဦးအား တင်ဆောင်ပြီး ဖောင်ကြီးလမ်းအတိုင်း မောင်းနှင်လာစဉ် မျက်လုံးတဖက်ပိတ်ဘုရားလမ်းနား အရောက်တွင် အငှားစီးသူများမှ ၎င်း၏ လည်ပင်းအားဓားဖြင့် လှီးပြီး ဆိုင်ကယ် လုယက်ခြင်း ခံရကြောင်း သိရသည်။
၎င်းမှလည်း အငှားသမားပိုင် ထီးဖြင့် ပြန်ရိုက်သဖြင့် မြက်တောထဲ ဝင်သွားကြောင်း၊ လည်ပင်းအလှီးခံရသည့် ဒဏ်ရာများမှာ ဓာတ်ပုံပါ အတိုင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဓားနှင့် လှီးသူများမှာ သူ့ဆိုင်ကယ်ကို ၃ ခါလောက် ငှါးစီးဖူးသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။